HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bichlamar Catalan Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galoà Goun Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Krio Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Norvezianina Oromo Ossète Pendjabi Persianina Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tankarana Tarasque Tigrigna Tiorka Tlapanèque Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Vezo Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Olona maro eran-tany no mandray soa avy amin’ny jw.org. Betsaka ny teny fankasitrahana voarain’ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah, talohan’ny Mey 2014. Ireto ny sasany tamin’izany:
Manampy ny ankizy
“Manan-janaka lahikely aho, dia efa mianatra izy. Tsy maintsy mitondra zavatra an’ny namany foana izy rehefa mody, ohatra hoe pensilihazo, kilalao kely, na solomaso mihitsy aza. Efa imbetsaka izahay no niezaka nanazava taminy hoe halatra izany ataony izany, ary ratsy ny mangalatra. Tsy nisy vokany anefa izany, raha tsy rehefa nalainay tao amin’ny jw.org ilay video hoe Ratsy ny Mangalatra. Tena nandaitra ilay izy sady tao amin’ilay nilain’ny zanakay mihitsy. Te hamerina an’ireo zavatra rehetra nalainy izy rehefa avy nijery an’ilay video. Efa manaiky mantsy izy izao fa tsy tian’Andriamanitra ny mangalatra. Tena nanampy anay ilay tranonkala!”—D. N., Afrika.
‘Tena nandaitra ilay video hoe Ratsy ny Mangalatra, sady tao amin’ilay nilain’ny zanakay mihitsy’
“Tian’ny zanako ilay tranonkala. Maka an’ireo video kely ao ry zareo, ary manampy azy ireo hampihatra ny toro lalan’ny Baiboly momba ny lainga sy ny halatra izy ireny. Mianatra toetra tsara hafa mahasoa azy eo amin’ny fiainana koa ry zareo, ka lasa tena ilaina eo amin’ny fiaraha-monina.”—O. W., Antilles.
Manampy ny mpianatra
“Nieritreritra aho hatramin’izay hoe enta-mavesatra ny fianarana, ary efa saika tsy hianatra intsony aho. Indray andro anefa aho namaky an’ilay lahatsoratra ao amin’ny jw.org hoe ‘Tokony Tsy Hianatra Intsony ve Aho?’ Lasa tsapako fa tena ilaina ny fianarana. Hitako koa hoe hampiofana ahy hiatrika ny hoavy sy hanampy ahy ho matotra ilay izy.”—N. F., Afrika.
“Nampianatra ahy ho tsara fitondran-tena any am-pianarana ny torohevitra ho an’ny tanora, ao amin’ilay tranonkala”
“Nampianatra ahy ho tsara fitondran-tena any am-pianarana ny torohevitra ho an’ny tanora, ao amin’ilay tranonkala. Nianarako koa hoe inona no hanampy ahy hifantoka amin’ny fianarana fa tsy ho variana amin’ny zavatra hafa.”—G., Afrika.
“Nitaraina ny mpiara-miasa amiko iray hoe nisy nampijaly ny zanany vavy tany am-pianarana, ary anisan’ny tena nampijaly azy ny ankizivavy iray. Nisy vokany ratsy teo amin’ilay zanany izany, satria lasa natahotra be izy ka tsy nety nianatra nandritra ny andro vitsivitsy. Noresahiko tamin’ilay mpiara-miasa amiko ny hevitra sasany tao amin’ilay kisarisary hoe Ahoana no Hanoherana ny Mpampijaly Nefa Tsy Hamono Azy? Hita ao amin’ny jw.org izy io. Tiany ilay soso-kevitra hoe ilaina ny mahay manao vazivazy, amin’izay ilay olona tsy mahateny. Dia noresahiny tamin’ny zanany ilay izy. Natoky tena kokoa avy eo ilay ankizy rehefa nandeha nianatra. Tsy dia nisy nampijaly intsony izy, tatỳ aoriana. Lasa tsara fanahy taminy aza ilay ankizivavy tena nampijaly azy.”—V. K., Eoropa Atsinanana.
Manampy ny tanora
“Misaotra anareo tamin’ilay lahatsoratra hoe ‘Fa Maninona Aho no Lasa Mampijaly Tena?’ Efa ela aho no nanana an’io olana io. Nieritreritra aho hoe izaho irery no tratran’ilay izy, ka raha hiresaka amin’olona aho, dia tsy hisy hahatsapa ny manjo ahy mihitsy. Tena nanampy ahy ny ohatra tao amin’ilay lahatsoratra. Hay mba misy mahatakatra ihany ny mahazo ahy!”—Tovovavy iray any Aostralia.
“Tena nanampy ahy ny ohatra tao amin’ilay lahatsoratra. Hay mba misy mahatakatra ihany ny mahazo ahy!”
“Mora tamiko ny nahita torohevitra momba ny olana mpahazo ny tanora, noho ny jw.org. Nisy lahatsoratra iray izay, ohatra, nanampy ahy hahafantatra ny atao hoe fanadalana vehivavy. Dia lasa fantatro hoe izaho kay efa tratran’ilay izy. Dia lasa haiko koa hoe inona no hataoko rehefa misy manadala ahy.”—T. W., Antilles.
Manampy ny ray aman-dreny
“Pelika be ny zanako lahy. Tsy hitako mihitsy indraindray izay hanaovana azy, satria miovaova be ny toetrany sady tsy ampoizinao mihitsy ny fihetsiny. Dia lasa tsy nahay nifampiresaka izahay. Indray andro aho niditra tao amin’ny jw.org, dia nijery an’ilay fizarana ho an’ny mpivady sy ny ray aman-dreny. Nahita lahatsoratra be dia be nety tamiko sy nanoro ahy ny fomba hiresahako amin’ny zanako aho tao. Na izy koa aza mba nandray soa tamin’ilay tranonkala. Miresaka tsara amiko izy izao, ka tsy misalasala milaza ny zavatra mahafaly na mampanahy azy.”—C. B., Afrika.
“Matetika no amin’ny fotoana tena ilanay azy no miseho ao amin’ny jw.org ilay lahatsoratra. Dia manampy anay ilay izy mba hahita izay tokony hatao amin’ny olana mahazo ny zanakay”
“Tianay ray aman-dreny ny jw.org, satria misy fomba mahafinaritra ahafahanay mampianatra ny zanakay. Nanampy ny zanakay, ohatra, ilay kisarisary momba ny atao hoe tena namana. Lasa fantatr’izy ireo hoe hoatran’ny ahoana ny namana tsara. Dia namana hitarika azy hanao ny tsara no fidin-dry zareo. Matetika no amin’ny fotoana tena ilanay azy no miseho ao amin’ny jw.org ilay lahatsoratra. Dia manampy anay ilay izy mba hahita izay tokony hatao amin’ny olana mahazo ny zanakay. Tena betsaka ny torohevitra hita ao!”—E. L., Eoropa.
Manampy ny mpivady
“Efa enin-taona izao ny fanambadianay. Samy manana ny fomba firesaka nahazatra anay sy ny fomba fijerinay zavatra izahay, hoatran’ny mpivady rehetra ihany. Nahaliana ahy ilay lahatsoratra tao amin’ny jw.org hoe ‘Henoy Tsara ny Vadinao.’ Atorony ao hoe ahoana no atao raha te hahay hihaino. Novakiko ilay lahatsoratra dia avy eo noresahiko tamin’ny vadiko. Niezaka nampihatra ny torohevitra tao izahay.”—B. B., Antilles.
“Io tranonkala io no nanavotra ny tokantranoko”
“Herintaona izay no nifaneraserako tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah, ary tena te hankasitraka anareo aho noho ny jw.org. Betsaka ny zavatra nianarako avy ao amin’ilay tranonkala, anisan’izany ny fomba hifehezako ny hatezerako sy hoe ahoana no hahatonga ahy ho vady mahafatra-po sy raim-pianakaviana be fitiavana. Tsoriko fa io tranonkala io no nanavotra ny tokantranoko.”—L. G., Antilles.
Manampy ny marenina
“Nanampy ahy hahita fifaliana amin’ny fiainana indray ny jw.org. Nihanahay tenin’ny tanana aho rehefa nijery an’ireo video amin’ny Tenin’ny Tanana Amerikanina. Nieritreritra foana aho hatramin’izay hoe tsy mba ho afaka hanana tanjona eo amin’ny fiainana. Tena nanohina ny foko anefa ilay video hoe Efa Misy Amin’ny Fiteniko ny Tenin’Andriamanitra, ary vao mainka aho tapa-kevitra hifantoka amin’ny lafy tsaran’ny fiainana.”—J. N., Afrika.
“Nanampy ahy hahita fifaliana amin’ny fiainana indray ny jw.org”
‘Tena tsara ilay tranonkala. Manampy ny marenina mantsy no asako, indrindra ny tanora marenina. Be dia be ny zavatra amin’ny tenin’ny tanana ao amin’ilay tranonkala, ka lasa nihanahay tenin’ny tanana aho. Afaka manoro hevitra an’ireo te hanatsara ny fiainam-pianakaviany sy ny fifandraisany amin’ny namany koa aho izao.’—K. J., Antilles.
Manampy ny jamba
“Jamba aho ary nandray soa tamin’ny jw.org. Mahazo fanazavana be dia be aho ao. Amam-bolana izany vao ho tonga atỳ amiko raha alefa paositra. Nanatsara ny fiainam-pianakavianay ilay tranonkala, sady nahatonga ahy ho afaka hanampy ny manodidina ahy. Rehefa misy fanazavana azon’ireo namako tsy jamba, dia mba mahazo koa aho.”—C. A., Amerika Atsimo.
“Nanatsara ny fiainam-pianakavianay ilay tranonkala, sady nahatonga ahy ho afaka hanampy ny manodidina ahy”
“Tena manampy be mihitsy ny jw.org ho an’ireo tsy mahay mamaky soratra Braille, na tsy manam-bola hividianana boky amin’ny soratra Braille. Lasa maharaka ny fanazavana farany ny jamba rehefa mihaino an’ireo zavatra maro noraisim-peo ao. Natao ho an’ny olon-drehetra tsy an-kanavaka tokoa io tranonkala io. Lasa mahatsapa ho misy vidiny sy mba anisan’ny fiaraha-monina izahay na dia jamba aza.”—R. D., Afrika.
Manampy an’ireo te hahalala an’Andriamanitra
“Feno teny saro-takarina ny tranonkala ara-pivavahana hafa, ka ny mpitondra fivavahana ihany no mahazo azy. Tsy hoatr’izany anefa ny tranonkalanareo. Tsy hoe totofany fanazavana be dia be ianao, ka lasa tsy hitanao intsony izay horaisina. Tsotra sady mivantana ny zavatra resahin’ny tranonkalanareo. Tsy be kabary ilay izy na hoe feno filozofia. Ataony izay hahatsapanao fa tsy zavatra sarotra be ny hoe miezaka hanam-pinoana, fa afaka mahavita an’izany na dia ny olon-tsotra aza.”—A. G., Azia.
‘Tsotra sady mivantana ny zavatra resahin’ny tranonkalanareo. Ataony izay hahatsapanao fa afaka miezaka ny hanam-pinoana na dia ny olon-tsotra aza’
“Tena nampalahelo ny fiainako raha tsy teo ny jw.org. Hoatran’ny hoe jiro azoko ampirehetina io tranonkala io eto amin’ity tontolo maizina ara-panahy ity. Tonga aho dia afaka mamaky sy mihaino an’ireo lahatsoratra manazava ny hevitr’Andriamanitra, sady mahafantatra ny valin’ny fanontaniana maro momba ny fiainana.”—J. C., Antilles.
‘Faly aho fa mbola mahazo fanampiana mba hahatonga ahy hifandray amin’Andriamanitra, na dia atỳ anaty ala mikitroka atỳ aza. Very mihitsy aho raha tsy nisy an’io tranonkala io.’—M. F., Amerika Atsimo.
Tian’i Jehovah Andriamanitra hahafantatra ny marina ianao. Hanampy anao hahazo izay lazain’ny Baiboly izy.